မိသားစုနဲ့အတူ ပျော်ရွှင်စွာ ကြော်ငြာရိုက်ကူးခဲ့တဲ့ ပန်းရောင်ခြယ်
5 Apr 2018 . 12:41 PM
အဆိုတော် ဂရေဟမ်ရဲ့ သမီးကြီး ပန်းရောင်ခြယ် ဟာ အခုဆိုရင် တေးသီချင်းတွေကို သီဆိုရုံတင်မကဘဲ ကြော်ငြာတွေကိုပါရိုက်ကူးနေပြီဖြစ်ပါတယ်။ ပြီးခဲ့တဲ့မတ်လ၃၁ ရက်နေ့ က လည်း မိသားလိုက် ကြော်ငြာ တစ်ခုကို ရိုက်ကူးနေတဲ့မြင်ကွင်းတွေကို သူမရဲ့လူမှုကွန်ရက်ပေါ်ကို တင်ထားတာတွေ့ရပါတယ်။
“မိသားစုနဲ့အတူ Gery Crackers တီဗွီနဲ့ဓာတ်ပုံကြော်ငြာ ရိုက်ကူးရေး 💛” ဆိုပြီးတော့ မိသားစု နဲ့ အတူပျော်ရွှင်စွာကြော်ငြာရိုက်ကူးနေတဲ့ ပန်းရောင်ခြယ်တို့ညီမနှစ်ယောက်ပုံတွေ နဲ့ ကြော်ငြာရိုက်ကွင်းပုံ တွေကို သူမရဲ့ လူမှုကွန်ရက်ကနေ ပြန်လည်ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။
ပန်းရောင်ခြည် ဟာ သီချင်းသံစဉ် ချိုချိုလေးတွေကို သီဆိုရင်း မိန်းကလေး ပရိသတ်တွေ က အားကျကြသလို အမျိုးသားပရိသတ်တွေရဲ့ ကြိုက်နှစ်သက်မှုကို ရရှိနေတဲ့ ဆယ်ကျော်သက် အနုပညာရှင် တစ်ဦး ဖြစ်ပါတယ်။
အဆိုတော် ဂရေဟန် တို့မိသားစု
မိသားစု နဲ့အတူ အောင်မြင်မှုတွေကိုလည်း ဒီထက်မက ရရှိပါစေ လို့ အခရာ ကနေဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်။ ပရိသတ်ကြီးရော ပန်းရောင်ခြယ် ဆိုတဲ့ ကောင်မလေး ကို ချစ်ရင် တစ်ခုခုပြောခဲ့ဦးနော်…….
Photo Credit:Pan Yaumg Chel Facebook
မိသားစုနဲ့အတူ ပြျောရှငျစှာ ကွျောငွာရိုကျကူးခဲ့တဲ့ ပနျးရောငျခွယျ
အဆိုတျော ဂရဟေမျရဲ့ သမီးကွီး ပနျးရောငျခွယျ ဟာ အခုဆိုရငျ တေးသီခငျြးတှကေို သီဆိုရုံတငျမကဘဲ ကွျောငွာတှကေိုပါရိုကျကူးနပွေီဖွဈပါတယျ။ ပွီးခဲ့တဲ့မတျလ၃၁ ရကျနေ့ က လညျး မိသားလိုကျ ကွျောငွာ တဈခုကို ရိုကျကူးနတေဲ့မွငျကှငျးတှကေို သူမရဲ့လူမှုကှနျရကျပျေါကို တငျထားတာတှရေ့ပါတယျ။
“မိသားစုနဲ့အတူ Gery Crackers တီဗှီနဲ့ဓာတျပုံကွျောငွာ ရိုကျကူးရေး 💛” ဆိုပွီးတော့ မိသားစု နဲ့ အတူပြျောရှငျစှာကွျောငွာရိုကျကူးနတေဲ့ ပနျးရောငျခွယျတို့ညီမနှဈယောကျပုံတှေ နဲ့ ကွျောငွာရိုကျကှငျးပုံ တှကေို သူမရဲ့ လူမှုကှနျရကျကနေ ပွနျလညျဖျောပွပေးလိုကျပါတယျ။
ပနျးရောငျခွညျ ဟာ သီခငျြးသံစဉျ ခြိုခြိုလေးတှကေို သီဆိုရငျး မိနျးကလေး ပရိသတျတှေ က အားကကြွသလို အမြိုးသားပရိသတျတှရေဲ့ ကွိုကျနှဈသကျမှုကို ရရှိနတေဲ့ ဆယျကြျောသကျ အနုပညာရှငျ တဈဦး ဖွဈပါတယျ။
အဆိုတျော ဂရဟေနျ တို့မိသားစု
မိသားစု နဲ့အတူ အောငျမွငျမှုတှကေိုလညျး ဒီထကျမက ရရှိပါစေ လို့ အခရာ ကနဆေုတောငျးပေးလိုကျပါတယျ။ ပရိသတျကွီးရော ပနျးရောငျခွယျ ဆိုတဲ့ ကောငျမလေး ကို ခဈြရငျ တဈခုခုပွောခဲ့ဦးနျော…….